ဦးဦးဗိုက် …. :D | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဦးဦးဗိုက် …. :D
ဦးဦးဗိုက် …. :D
Posted by etone on Jan 14, 2011 in Copy/Paste, News | 11 comments
ဖားတုလို့ ခရုခုန် ... ဟိဟိ
Thomas Beatie မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အော်ရီဂွန် ပြည်နယ် ရှိမြို့တွင် ၎င်း၏ ဇနီး Nany Roberts နှင့် အတူ နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မုတ်ဆိတ်မွှေးများ ရှိပြီး ယခုအချိန်တွင် ကိုယ်ဝန် (၅)လ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
Beatie မှာ လိင်ပြောင်းလဲ ထားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မူလက ဟာဝိုင်ရီတွင် နေထိုင်ကာ Tracy Lagondino အမည်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သူ ၎င်း မှာ မိန်းမလျာများ အခွင့်အရေး %
စိတ်ကုန်ပါတယ် ပို့စ်တစ်ခါတင်ရတာ မလွယ်ဘူး ။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ အပေါ်က အဆက်ကို ဒီမှာပဲဆက်ဖတ်တော့ …
Beatie မှာ လိင်ပြောင်းလဲ ထားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မူလက ဟာဝိုင်ရီတွင် နေထိုင်ကာ Tracy Lagondino အမည်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သူ ၎င်း မှာ မိန်းမလျာများ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှား ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ လိင်ပြောင်းလဲ ခွဲစိတ်မှု့လုပ်ခဲ့ပြီး နောက် ရင်သားများကိုလည်း ခွဲစိတ် ထုတ်ပစ်ခဲ့ပြီး testosterone ထိုးဆေးများ ပုံမှန်ထိုးသွင်း ခဲ့ကာ ယောကျာင်္းဘဝကို တရားဝင်ခံယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူမ၏ အမျိုးသမီး မျိုးပွား အင်္ဂါကိုမှု ထုတ်ပစ်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
လက်ရှိ အခြေအနေတွင်မူ ၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သည့် Nancy Robert မှာ ကလေးမရနိုင်တော့သည့် အခြေ အနေကြောင့် ယခုလို သူမကိုယ်စား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင်က ပထမဆုံး အဖြစ် တစ်ကြိမ် စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်လောက်အောင် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည်။ ယခုအကြိမ်တွင်မူ အမည်မသိ သုတ်သွေး အလှူရှင်၏ အကူ အညီဖြင့် အောင်မြင်စွာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရသည့် အတွေ့ အကြုံအား မေးမြန်းရာ၌မူ ၎င်းအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးလို ပင်ခံစားရကြောင်း နှင့် လာမည့် ဇွန်လတွင် ကလေးမွေးရန် သက်မှတ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
credit to : မှော်စရာgroup
ဒီသတင်းက တော်တော်ကြီးကို ကြာနေပြီ …
ဟုတ်လား ။ အဲ့ဒီလောက်တောင်ကြာနေပြီလား ။ ဒီမနက်မှ မေးလ်ထဲဝင်နေလို့ ဖတ်ကြည့်ပြီး အရင်းအတိုင်းကူးပေးလိုက်တာ ။
ကွီးလဲ ဒီလိုပို.စ်တစ်ခုတင်ဖို.လုပ်နေတရ်။ သတင်းကတော့ မြန်မာနိင်ငံက သတင်းပဲ …. ဟီးးးး
ဒီနေ့ နဲ့ ပါဆို မသောက်တာ သုံးရက်ရသွားပြီ
ဗိုက်ပူပြီး ထိပ်ပြောင်လာရင် သူဌေးဖြစ်ပြီဆိုဘဲ တော့ကာ
ငါထိပ်ပြောင်ရင်တော့ လန်းပြီလို့ 
ဓါတ်ပုံက အင် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗိုက်ကဒါလေါက်ပူနေပေမဲ့ရင်သားကဒီတိုင်း ..
ဪ………အဆန်းပဲ ဘာတွေဖြစ်တုန်ကြဘီလဲဂျာ နွားမလယ်တော့ဝူး @_@
အရူးထတာ သူတို့ သူတို့။
ယောက်ျား ဖြစ်ပြန်တော့ အဆန်းထွင်
အီးတုံး တို့ မိုက်တယ်ဟေ့ ပို့စ်တစ်ခုကို 90ရအောင်တင်တတ်တယ်
တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့ပြောပါတယ်……… ကြာတော့ကြာနေပြီ Forward Mail မှာဖတ်လိုက်ရတာပါ………
ဟုတ်တယ် အီးတုံးလိုပဲအတုခိုးပြီး ပိစိကွေးလည်း post 1 ခုကို 90 ရအောင်လုပ်အုံးမယ် ….. ဟီး ဟီး
အောင်မလေးတော် ပို့စ်တစ်ခုကို ကိုးဆယ်ရအောင်တင်တာ မဟုတ်ရပါဘူး ။ ပို့တင်ရင်းတစ်ပိုင်းတွေပဲပြတ်ပြတ်နေလို့ အောက်မှာ ပြန်ရေးပေးထားတာ ။ ပို့စ်တစ်ခုတင်ရတာ refresh ပြန်လုပ်ရတာတင် ကိုးခါမကဘူး …။ ပြချင်လွန်းလို့ တင်ပေးထားတာ ။